Sida loo Play AVI on OS X Yosemite
Nidaamka Mac cusub ayaa Apple ee ku saabsan tahay in ay sii daayaan dayrtan. Waxa aad bixisaa waayo-aragnimo cusub oo aad qalabka Mac iyo macruufka iyo barnaamijyadooda dhisay-in awood badan. Si kastaba ha ahaatee, marka ay timaado ciyaaro AVI on cusub OS X Yosemite, waxaad ka heli doontaa dhegto nidaamka cusub Mac ma taageeri ciyaaro files AVI. Maqaalkani waxa uu kuu sheegi doonaa sida loo ciyaaro files AVI on Yosemite iyadoo labada xal hoos ku qoran.
Xalka 1: Play AVI on Yosemite la Video Best ka Converter
Xalka 2: Play AVI on Yosemite 100% Video a Free & Xoog Player
Qeybta 1: Play AVI on Yosemite la Video Best ka Converter
Professional Video Converter: Waxaa badasha videos ama ka tiro balaadhan oo ah qaabab, oo ay ku jiraan AVI, MKV, MOV, MP4, wmv, iwm
Tayada Sare Output Video: App Tani badasha videos aan laga badinin video tayada asalka ah. Waxaad jirin walwal ku saabsan tayada wax soo saarka video ah.
Sida dhaqsaha badan Video Conversion Tool: Waxay bixisaa 30 X dhaqsiyaha badan xawaaraha diinta. File badan loo samayn karo daqiiqado yar gudahood.
Xoogbadane kale iDVD: Waxaad u isticmaali kartaa sida DVD gubi awood leh si ay u gubaan video inay DVD la arrimo badan oo menu beatifully loogu talagalay.
Great iMovie Video Editor: Waxay kuu ogolaanaysaa inaad xaalkaa videos sida qalab xirfadeed video tafatirka, iMovie, iyadoo hawlaha tafatirka sare.
Downloader YouTube: Qaado qalab si download aad jeceshahay YouTube, Facebook, ama Netflix videos xawaare degdeg ah iyo in xal sare.
Sida loo Play AVI on Yosemite la Video Converter Ultimate
1. Import AVI in APP this
Waxaad kaliya jiidi karaan jeedi files si aad u weel this, ama guji "+" bidixda hoose ee interface ay ku darto files si Converter this.
Fiiro gaar ah: app wuxuu taageeraa diinta Dufcaddii. Waxaad dajiyaan karaa files badan intii suurto gal ah iyo iyaga badalo isku mar si loo badbaadiyo waqtiga aad.
2. Set Yosemite qaab ay taageerayaan sidii qaab wax soo saarka
Yosemite taageerada ciyaaro MOV, MP4 iyo M4V. Waxaad dooran kartaa mid ka mid ah qaababka sida qaabab wax soo saarka aad doorbiday. Kaliya Waxaad riix kartaa "Video" in ay leeg- tahay wax soo saarka hoose ee interface ka, ka dibna maraan si ay u doortaan MOV, MP4 M4V iyo sida qaabab wax soo saarka.
Haddii aad rabto in aad wada midowdo ah laga keeno video clips oo dhan, kaliya aad eegi kartaa "midowdo All Videos" sanduuq. d
3. Play AVI on Yosemite
Ka dib dejinta qaababkan soo saarka midig, kaliya aad u bilaabi kartaa si loogu badalo adigoo riixaya "Beddelaan" button on xaq hoose ee interface ka. Ka dib markii ay diinta ka, kaliya aad u riixi kartaa "Output" gal si aad u ogaato faylasha la gediyay.
Ma ciyaari karaa AVI ku saabsan nidaamka cusub Mac, waxay leeyihiin xaqa ah Wondershare Player rakibi aad Mac. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad ciyaari dhowaad dhammaan video iyo files audio iyo socon kara nidaamka Yosemite ah. More Features:
Qaabab Wide taageerayaan: Waxaad isticmaali kartaa inuu u ciyaaro badan video Abd files audio ee fomats ee FLV, AVI, MKV, wmv, MOV, MP3, WMA, AAC, FLAC, M2TS, VOB, F4V iyo 3GP, iwm
Latest Video Radidiyaha List: Waxaad ka raadin kartaa basaasa ugu dambeeyay videos, filimada iyo music ka badan goobaha video qaybsiga online iyo offline.
Design dareen leh: app waxa uu aad u fudud oo user saaxiibtinimo interface, badhamada multi-functional oo caqligiisu kaalinta kontaroolada.
Comptibility Sare: Waxaad heli kartaa app this on your qalabka Mac, Windows, iPhone, iPad iyo Android.
6 m2ts ciyaaryahan daaqadaha iyo Mac
Sidee inay gool u sarifaan Video Faylal ay ku Yosemite
> Resource > Beddelaan > Sida loo Play AVI on OS X Yosemite